Peji 4 - 5 vakwikwidzi vakuru vaDean Ambrose muWWE - Wwe
5 vakwikwidzi vakuru vaDean Ambrose muWWE
# 2. AJ Styles
Dean Ambrose uye AJ Masitayera akatarisana
Dean Ambrose uye AJ Styles 'feud yaive yechinyakare kesi ye babyface vs chitsitsinho. Ambrose uyo akapinda mumakwikwi aya seanokunda mwanaface WWE Champion aive nebasa rekumusoro rekudzivirira bhanhire rake reChampionship pachitsitsinho chakangotendeuka AJ Styles, uyo aiuya kukunda kukuru pamusoro paJohn Cena paSummerSlam, 2016.
Kukwikwidzana kwaAmbrose nemaStyles kwaishamisa uye kunyangwe aimbove akarasikirwa neWWE Mushe mukudzivirira kwake kwekutanga kurwisa 'Iyo Phenomenal One' paBacklash, 'The Lunatic Fringe' zvirokwazvo haina kuwira pasi pecking odha pane yebhuruu brand yeSmackDown Live.
Nguva pfupi yapfuura, Dean Ambrose aizoenderera mberi nekupa ka16-nguva WWE World Champion John Cena kurasikirwa kwake kwekutanga kwakachena paWWE TV kekutanga mukati angangoita makore manomwe.
KuNo Mercy, Ambrose akabva akwikwidza mune imwe inoshamisa WWE Musoro wekumisidzana neAJ Styles, asi ino nguva nekusanganisirwa kwaJohn Cena futi.
Asi, kunyangwe hazvo akakundikana kuhwina WWE Musoro zvekare, Ambrose aizoenderera mberi nekukunda AJ Styles mumutambo usiri wezita paSmackDown Live uye kupokana pakati pevarume vaviri kwakazoguma nemutambo weTLC.
Uku kupokana kwakanyatso kuratidza kutanga kwechishamiso zita rekutonga kweAJ Styles, asi mukati mekukakavadzana kukuru uku, WWE yakakwanisa kuve nechokwadi chekuti Dean Ambrose akachengetedza danho rake rekumhanya uye akamuchengeta seimwe yematambudziko makuru nevakwikwidzi kuAJ Styles uye zita rake reWWE.
kusaina murume anokuda kubasa
suduruka kuti awane pfungwa dzake
joanna uye chip inowana mambure akakosha
nhetembo yekurasikirwa nenhengo yemhuri
apo vanhu vanokuitira utsinye
james ellsworth vs aj masitaera